सालको पातको ‘भ्यूज’ हालसम्मकै सर्वाधिक « Lokpath
२०७७, २६ श्रावण सोमवार ०७:२७
प्रकाशित मिति : २०७७, २६ श्रावण सोमवार ०७:२७
गीतमा कुलेन्द्र विश्वकर्मा र विष्णु माझीको मीठो स्वर भरेका छन् । युवा पुस्ताका गीतकार नवराज पन्तको शब्दमा वसन्त थापाले सङ्गीत दिएका छन्। स्रोता÷दर्शकले अत्यधिक रुचाएपछि गीतले एकाएक चर्चा र प्रसिद्धि कमाएको थियो । अहिले पनि गीतको भ्यूज निरन्तर बढेको छ । पछिल्लो एक महिनामा झण्डै दश लाख पटक हेरिएको छ । “स्रोताको मन जित्नु ठूलो कुरा रहेछ, व्यावसायिक हिसाबले पनि गीत सफल रह्यो”, सङ्गीतकार थापाले भने ।
झ्याउरे लयमा ठेट जनजीब्राका शब्द र मनछुने स्वरले गीतमा प्राण भरेको छ । कुशल अभिनय र नृत्यले दर्शक लोभ्याउँछ । म्युजिक भिडियोमा नायिका मरिष्का पोखरेलसँगै गायक विश्वकर्मा र सङ्गीतकार थापाको अभिनय छ । निर्देशन शिव विकले गर्नुभएको छ । हाल अमेरिकामा रहेका गीतकार पन्तका अनुसार गीतमा प्रेममा सिर्जित अविश्वास र त्यसको भोगाइको कारुणिक यथार्थबादी कथा छ । “मानवीय प्रेम र सम्बन्धमा आउने उतारचढाव गीतको रचनागर्भ हो”, उनले भने ।
गलबन्दीमा प्रकाश सपुत र शान्ति श्री परियारको स्वर छ । शब्द, सङ्गीत र भिडियो निर्देशन पनि सपुतकै छ । म्युजिक भिडियोमा सपुत र अञ्जली अधिकारीको अभिनय छ ।
अञ्जु पन्तले गरिन् यसरी बिहे, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
चर्चित गायिका अन्जु पन्तले विवाह गरेकी छन् । उनले बुधबार थिर कोइरालासँग पाटनस्थित
प्रियंकाको नयाँ हेयर कट, इन्स्ट्राग्राममा तस्वीर भाइरल
काठमाडौं । ग्लोबल अभिनेत्री प्रियंका चोपडा निकै चर्चा कमाएकी अभिनेत्री हुन् । उनको
पछिल्लो समय केमा व्यस्त छिन् वर्षा सिवाकोटी ?
काठमाडौं । अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी फिल्म छोड्ने र जोडिनेमा अन्य अभिनेत्री भन्दा निकै
केही फरक काम गरौँ भन्ने उद्देश्यले ‘क्राइम पेट्रोल’ होस्ट गर्न लागेको हुँ : दीपकराज गिरी
काठमाडौं । चर्चित हाँस्य कलाकार एवम् निर्माता दीपकराज गिरी फेरि टेलिभिजनको पर्दामा देखिने
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै, सत्ता समीकरणको विषय टुंगो लाग्ला ?
माैसम, लोकपथ हाइलाईट, समाचार
देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्टयाङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना
एटलान्टाविरुद्ध रियल मड्रिड विजयी
च्याम्पियन्स लिगमा सिटीको सहज जित
वर्तमान सरकारले जनमत गुमाइसकेकाले मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ: कांग्रेस
फेरि पनि कुर्सीको खेल शुरू हुने खतरा छ;
हेर्नुहोस् फाल्गुन १३ गते बिहीवारको राशिफल